ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - ကိုရိုနာကပ်ဘေးနဲ့ စင်ကာပူလက်ခံတဲဲ့မြန်မာစားကုန် - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Myanmar / Singapore / Zaw Aung (Mon Ywa) / ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - ကိုရိုနာကပ်ဘေးနဲ့ စင်ကာပူလက်ခံတဲဲ့မြန်မာစားကုန်
ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - ကိုရိုနာကပ်ဘေးနဲ့ စင်ကာပူလက်ခံတဲဲ့မြန်မာစားကုန်
Community, Coronavirus, Experience, Myanmar, Singapore, Zaw Aung (Mon Ywa)
၂၀၂၀ မတ်လမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါကပ်ကြီး တကမ္ဘာလုံး တရုပ်ကအစ၊ ဉရောပ၊ အမေရိကား၊ အီရန် တအုန်းအုန်း မကြုံစဖူး ဒုက္ခရောက်နေချိန်ပါ။ စင်ကာပူအစိုးရက အစားအသောက်က စပြီး ရောဂါကင်းရှင်းဖို့ ၅နိုင်ငံက စားသောက်ကုန်တွေပဲ တင်သွင်းခွင့်ရှိတယ် ကြေငြာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်နေတာကြောင့် အံသြဝမ်းသာရပါတယ်။ တရုပ်ကတဆင့် တကမ္ဘာလုံး ရောဂါပြန့်ချိန် ၃လ ကြာတဲ့အထိ ရောဂါပိုးမတွေ့တာ (၈) နိုင်ငံပဲ ကျန်တယ်။ မြန်မာနဲ့လာအို တို့ (၈) နိုင်ငံစာရင်းထဲ ပါဝင်ပေမဲ့ ၂၃-မတ်လ မှာတော့ နှစ်နိုင်ငံစလုံး ကိုရိုနာပိုး တွေ့သွားကြတယ်။ ဒီစာရေးချိန် ၃၀-မတ်လ မှာ ၁၀ဉီး တွေ့ရှိပြီး နိုင်ငံခြားက လာသူများ ဖြစ်တယ်၊ တယောက် ကပဲ ပြင်သစ်တိုးရစ်များကို ၁၀ရက်လောက် အတူသွားလာခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ထိုင်းက ပြန်လာသူ တစ်ဉီး ပိုးတွေ့လို့ တကားဝင် ထိုင်ကပြန်လာသူ ၂၃၀၀၀ ရှိနေတာကြောင့် Big Outbreak ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အစိုးရက ကြေငြာထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးမှု မလုပ်နိုင်လို့ ပိုး​တွေ့သူ အလွန်နည်းပေမဲ့ အချက်အလက်အရ အထိခိုက်အနည်းဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ ဖွံဖြိုးမှုနည်းပြီး ဆင်းရဲလို့ ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ကွာရန်တိန်း ပဲ အထူးလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာပြသူ အလွန်များပြား လာရင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ အဖြေမရှိသေးတဲ့မေးခွန်းပါ။
ကိုရိုနာကပ်ဘေး မှာ အလုပ်ရုံတွေ ရပ်ဆိုင်း၊ လော့ဒေါင်း ကွာရန်တိန်း များစွာ ဖြစ်လာရင်၊ ပြည်သူလူထု စားဖို့ စားသောက်ကုန် လုံလောက်သလား မေးခွန်း နဲ့ လုံလောက်ရင် သိုလှောင်မထားပဲ ပြည်သူလူထုထံ ဖြန့်ဝေပေးဖို့ အစိုးရခေါင်းဆောင်များ အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ မြန်မာ၊ ထိုင်း နိုင်ငံများက စားသောက်ကုန် လုံလောက်ပေမဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းရင် လုယက်၊ ဆူပူမှုများစွာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က စားသောက်ကုန် ဖူလုံရုံမက အမြဲပိုလျှံပါတယ်။ စျေးကွက်ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနဲ့မြန်မာစားကုန် ကို ပြန်ကြည့်ရင် -
၂၀၁၀ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ် မြန်မာစားသောက်ကုန် ဆန်၊ ဆီ၊ ကြက်သွန်၊ သရက်သီး၊ ဖရဲသီး၊ ငါး၊ ပုဇွန် စတဲ့ စားကုန်တွေ စင်ကာပူက မြန်မာလူဉီးရေ. ၂သိန်းလောက်ကို အားကိုးပြီး လာရောင်းဖို့ Bukit Panjan, Jurong နေရာ လက်ကားဆိုင်များထံ တဆိုင်ဝင်၊ တဆိုင်ထွက် ကြိုးစားကြည့်ဖူးပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်တွေက လူကြည့်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကလား မေးတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ထွက်ကုန်တွေပါ ပြောတော့ ဆိုင်အများစုက ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် မျက်နှာပျက်သွားတယ်။ နိုး နိုး နဲ့ ညင်းပယ်ကြတယ်။ နမူနာတောင် မကြည့်ဘူး။ သဘောကောင်း ဆိုင်ရှင်တွေကတော့ ထိုင်းကိုပဲ ယုံတယ် We trust Thailand product. လို့ ခပ်ရှင်းရှင်း ပြောကြတယ်။ ဆိုလိုတာက မြန်မာပြည် ဆင်းရဲမွဲတေ. ညစ်ပတ်လို့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးမှာ ကြောက်တဲ့ပုံစံ အလန့်တကြား ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်။ စင်ကာပူနေထိုင်တဲ့ မြန်မာတွေတောင် မြန်မာပေါ်ဆန်းဆန် ဝယ်မစားဘူး၊ ပေါင်းအိုး အဖုံးတွေ မှာ မြန်မာထမင်းအမြှတ်တွေ ကပ်နေလို့ ၊ မြန်မာဆန်ကို စင်ကာပူက မြန်မာတွေတောင် ချက်မစားချင်ကြပါ။ အဲဒီခေတ် ငါးပုဇွန် လက်ကားစျေးမှာတော့ မြန်မာငါး၊ ပုဇွန်တွေ အမြောက်အများ ဝယ်လို့ရ​ နေပါတယ်။
အခု ၂၀၂၀ မှာတော့ အခြေအနေ အများကြီးပြောင်းသွားပါပြီ။ မြန်မာ့ ဆန်၊ ဆီ၊ ကြက်သွန်၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံ နဲ့ ငါးပုဇွန်တွေ၊ သရက်၊ဖရဲ၊ သခွား၊ ဇီးသီးတွေ တရုပ်ပြည်က အကုန်ဝယ်နေပါပြီ။ စင်ကာပူကလည်း ကိုရိုနာပိုးကင်းတဲ့၊ စိတ်ချရတဲ့ စားသောက်ကုန် ၅နိုင်ငံ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။
ဇော်အောင်(မုံံံံံံရွာ) - ကိုရိုနာကပ်ဘေးနဲ့ စင်ကာပူလက်ခံတဲဲ့မြန်မာစားကုန် Reviewed by MoeMaKa on 10:00 AM Rating: 5